Izindaba - Amanani Wensimbi YaseYurophu Alulama Njengokusongela Okungenayo Kunciphisa
Amanani Wensimbi YaseYurophu Alulama Njengokusongela Okungenisa Kwehla
Abathengi baseYurophu bemikhiqizo yamatshe okusila baqala kancane ukwamukela kancane ukwenyuka kwamanani okuhlongozwayo, maphakathi / ngasekupheleni kukaDisemba 2019. Isiphetho sesigaba sesikhathi eside sokucekela phansi siholele ekwenzeni ngcono ekufuneni okubonakalayo. Ngaphezu kwalokho, ukusikeka komkhiqizo, okwenziwa ngabenzi bensimbi basekhaya, engxenyeni yokugcina ye-2019, kuqale ukuqinisa ukutholakala nokunweba izikhathi zokuhola. Abahlinzeki bezwe lesithathu baqala ukukhuphula amanani abo, ngenxa yokwenyuka kwezindleko zempahla eluhlaza. Njengamanje, amakhotheshini wokungenisa akhokhelwa cishe ngama- € 30 ngethani ekunikezweni kwasekhaya, okushiya abathengi baseYurophu benemithombo embalwa yokuhlinzeka.
Imakethe yensimbi, ekuqaleni kukaJanuwari 2020, yayihamba kancane, njengoba izinkampani zabuya emikhosini eyandisiwe kaKhisimusi / kaNcibijane. Noma yikuphi ukuguquka emisebenzini yezomnotho kulindeleke ukuthi kube nesizotha, esikhathini esimaphakathi. Abathengi bayaxwaya, besaba ukuthi, ngaphandle kokuthi ukufunwa kwangempela kuthuthuke kakhulu, ukwanda kwentengo akunakuma. Yize kunjalo, abakhiqizi bayaqhubeka nokukhuluma ngamanani entengo phezulu.
Imakethe yaseJalimane yahlala ithule, ekuqaleni kukaJanuwari. AbakwaMills bamemezela ukuthi banezincwadi ezinhle zoku-oda. Ukwehliswa kwamandla okwenziwe engxenyeni yokugcina ka-2019, kube nomthelela omuhle kumanani entengo yomkhiqizo wokugaya. Akukho msebenzi obalulekile wokungenisa ophawuliwe. Abenzi bensimbi basekhaya bafuna ukwenyuswa okwengeziwe ngasekupheleni kwekota yokuqala / ekuqaleni kwekota yesibili.
Izintengo zomkhiqizo we-French strip mill zaqala ukukhuphuka maphakathi / ngasekupheleni kukaDisemba 2019. Umsebenzi uthathwe ngaphambi kweholide likaKhisimusi. Izincwadi zoku-oda zikaMills zithuthukile. Ngenxa yalokhu, izikhathi zokuhola zokulethwa zandisiwe. Abakhiqizi be-EU manje sebebheke ukusebenzisa amanye amanani anyuka ka- € 20/40 ngethani. Ukuthengiswa kwezigidigidi ngoJanuwari kuqale kancane. Imakethe esezansi iyasebenza futhi abasabalalisi balindele ukuthi ibhizinisi lihlale ligculisa. Kodwa-ke, okufunwa yimikhakha eminingana kungenzeka kwehle, uma kuqhathaniswa nonyaka odlule. Izingcaphuno zokungenisa kuleli, ezikhuphuke kakhulu, azisancintisani.
Izibalo zomkhiqizo we-Italian strip mill zifike ezansi, kulo mjikelezo, ekupheleni kukaNovemba 2019. Bakhuphuke kancane ekuqaleni kukaDisemba. Emasontweni amabili edlule onyakeni, kuqashelwe kabusha ukuvuselelwa kwesidingo, ngenxa yomsebenzi wokuqalisa kabusha. Amanani aqhubeka nokukhuphuka. Abathengi babona ukuthi abenzi bensimbi babezimisele ukukhulisa amanani esisekelo ukuze banciphise ukusetshenziswa kwemali yabo eluhlaza okhulayo. Izigayo ziphinde zahlomula ngokuncipha kokuphazamiseka kokungeniswa kwezwe ezweni lesithathu, njengoba iningi labaphakeli bomhlaba liphakamisa izingcaphuno zabo. Izikhathi zokulethwa kokulethwa ziyanda ngenxa yokusikeka kokukhiqizwa kwangaphambilini, kanye nokumiswa / ukuphuma kokugaya ngesikhathi seholide likaKhisimusi. Abahlinzeki baphakamisa okunye ukunyuka kwentengo. Izikhungo zezinsiza ziyaqhubeka nokuthola ubunzima bokwenza imingcele yenzuzo eyamukelekayo. Isimo somnotho asisihle.
Ukukhishwa kokukhiqizwa kwe-UK kwaqhubeka nokuwohloka, ngoDisemba. Yize kunjalo, abasabalalisi bezinsimbi abaningi babematasa kulungiselelwa uKhisimusi. Ukudla kwe-oda, kusukela eholidini, kunengqondo. Isimo esibi sesiphelile selokhu kwaqala ukhetho. Abahlinzeki bemikhiqizo yesigcawu bakhuphula amanani. Amadili amaningi aphothuliwe, ngasekupheleni kukaDisemba, ngamanani ayisisekelo acishe abe ngu- £ 30 ngethoni ephakeme kunangezikhathi zokuhlala kwangaphambilini. Kuphakanyiswa okunye ukunyuka kodwa abathengi babuza ukuthi ngabe lokhu kuyaqhubeka yini, ngaphandle uma isidingo sithuthuka kakhulu. Amakhasimende ayanqikaza ukufaka ama-oda amakhulu phambili.
Izinguquko eziningi zamanani entengo zenzekile emakethe yaseBelgium, phakathi naphakathi / ngasekupheleni kukaDisemba. AmaMills, emhlabeni jikelele, asebenzise ithuba lokunyuka kwezindleko zokufaka ukuthuthukisa amanani abo ensimbi. EBelgium, abathengi bensimbi, ekugcineni basivuma isidingo sokukhokha imali ethe xaxa, yize ingaphansi kwaleyo ebekwe ngabakhi bensimbi. Lokhu kunike amandla umsebenzi wokuthenga ukuze uqhubeke. Kodwa-ke, abathengi babuza ukugomela kokuthi ukufunwa kwangempela kushintshe kakhulu. Ukunyuka kwamanani okuqhubekayo akuqinisekile ezimweni zamanje zemakethe.
Isidingo saseSpain semikhiqizo yokugaya imichilo okwamanje sizinzile. Amanani esisekelo abuyisiwe, ngoJanuwari. Umfutho wentengo obheke phezulu uqale phakathi noDisemba futhi uye wagcinwa, lapho kubuya amaholide asendaweni. Ukudicilelwa phansi kwezinto bekuqhubeka, ekuqaleni kukaDisemba. Manje, izinkampani zidinga uku-oda kabusha. Abakhiqizi bafuna amanani anyukayo okulethwa ngoMashi futhi benyuse namanani ka-Ephreli. Kodwa-ke, izinto ezishibhile, ezivela emithonjeni yezwe lesithathu, ezibhukwe ngo-Okthoba / Novemba, seziqala ukufika. Lokhu kungasebenza njengesiphikiso uma kuqhathaniswa nokukhuphuka kwentengo yasekhaya.
Ithuluzi Elisebenzayo Lensimbi Elishubile Ibha Flat, Tct Isiyingi Saw Blade Yensimbi, Hss M2 Isiyingi Saw Blades, Tct Isiyingi Saw Blade, Tct Isiyingi Saw Blades, Hss M35 Isiyingi Saw Blades,